Akhriso: Qaraar-ka Golaha Shacbaka Ee Ku Saabsan Gurmadka Deg-deg Ah Ee Abaaraha – Goobjoog News
Golaha shacabka ayaa ku jira dooodda qaraar ku saabsan gurmadka deg-degga ah ee abaaraha, arrintaas oo timid kadib markii dalka meel walba ay saameysay abaarta.
Warbixintan Waxaa ay ku bilaabatay sidan:
Golaha Shacabka Soomaaliya
Markuu fiiro gaar ah u yeeshay: in Qur’aanka Karrimka iyo Sunnada Rasuulkeena Suuban (csws) iyo ilaalinta maqaasiidda sare Shareecada iyo cadaaladda bulshadu yihiin mabda’ asaasiga u ah Dastuurka Jumhuuriyadda Federaalka si waafaqsan Qodobkiisa 3-aad .
Markuu Arkay: Qodobka 10-aad faqrada (1) ee Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qirayo in Karaamada aadanuhu tahay deeq Allahu swt ku mannaystay qof kasta oo Banii’aadan ah, xuquuqda aadanuhuna ay ay deeqdaas kasoo dhalatay.
Asaga oo xog ogaal u ah: in Qodobada 13-aad iyo 15-aad ee Dastuurkeena uu qof kasta siinayo xaqa nolosha, xoriyadda shaqsiyadeed iyo nabadgelyada qofnimadiisa. Sidoo kale ugu xog ogaalsan in cahdiga Qaruumaha Midoobay ee Xaquuqda Aadanuhu uu qof kasta oo banii-aadam ah siinayo isla xuquuqdan kor ku xusan ee dastuurkeena, saa daraadeedna xuquuqdaas yihiin xuquuq Alla-ku siiyeen ah oo banii aadamka addunka isku dhaqan _garto iskuna tixgeliyo.
Fiiro u yeeshay : in nabad la’aan iyo amni al’aan aanay suurtagal ahayn in lagaaro hormar dhaqaale iyo horumarinta iyo taakulaynta arrimaha bulshada toona.
Asaga oo ka welwelsan: xaaladaha ka dhashay jiilaalkaan dheeraaday oo durba sababay dhimasho dad iyo duunyoba leh, kana murugeysan xaaladda sii xumaanaysa ee abaarta ku sii fidaysa dalka, taas oo iyadana dhalisay barkacyaal boqolaal kun qof abaarikeenti ah, oo u baahan in si degdeg ah loola gurmado kaalmo Bani’aadanimo heer Qaran iyo heer Caalami ahba leh lala gaaro dadka abaartu tabaaleysay si halista naftooda iyo noloshooda ku sugan tahay looga badbaadsho.
Fiiro gaa ah u yeeshay : Abaabulka iyo jihaynta ay muujisay Dowladda Fedeaalka ayadoo kaashanayso Dowlado-Goboleedyada Federaalka iyo qaylodhaaminta ay u dirtay shacbiga Soomaaliyeed iyo beesha Caalamka ugana baaqday in wadajir loogu gurmado ka hortagga aafooyinka abaarta dalka ka jirta.
Hadaba Golaha Shacabka Soomaaliya, Asaga oo Qaddariyey: Baaqii saamaynta abaarta dalka haysa, oo ku jiray Hadaljeedinta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya iyo hadaljeedintii Ra’iisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka ka jeediyeen Golaha Shacabka hortiisa maalintii arbacada 1-da Maarso 2017:
WUXUU GO’AAMIYEY QODOBBADA SOO SOCDA
Goluhu wuxuu u baaqaya dhammaana Hay’adaha Dowladda Federaalka iyo Hay’adaha Dowlado-Goboleedyada xubno ka ah Federaalka shacbiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, Ogaalleyda Diinta, Muwaadiniinta Ganacsatada iyo Ururrada Bulshada in ay si wadajir ah ugu guntadaan isuna abaabulaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen una kaalmeyn lahaayeen walaalahooda jiilaalka oo dheeraaday aafeeyay iyo abaartaan sii baaheysana ku sii habsanayso.
Wuxuu dhammaan wasaaradaha iyo Hay’adaha Dowladda Federaalka iyo Dhammaan Maamullada Dowlado-Goboleedyada Dalka ku dhiirigelinaya in ay abuuraan jawi fududeeya gaarsiinta alaabada kaalmo-aadaneedka ah ee loo wado taakulaynta dadka u baahan iyo in ay la yeeshaan wada shaqeyn dhaw Ha’adaha sida kaalmo-adamiyeedka kuna korjoogteeyaan in xilgudashadoodu u fulinayaa si waafaqsan shuruucda dalka iyo mabaadii’da cahdiyada Caalamiga ah ee dadweynaha adduunka wada aqoonsanyahay .
Waxaa Dowladda iyo dhammaaan Hay’adaha Dowladda Federaalka iyo dhammaan Hay’adaha Dowlado-Goboleedyada Dalka la farayaa in ay canshuur-dhaaf u sameeyaan alaabada loo keeno gargaarka taakulaynta aadanha iyo ka hortagga aafooyinka abaarta.
Waxaa kaloo Hay’adaha kor ku xusan la farayaa in shuruucda xeer-nidaamiyada iyo habraacyada kale ee jira la laalo hadii ay wax u dhimayaan habsami u socodka hawlaha gaarsiinta taaakulaynta ama shaqada hay’adaha Gargaarka ku hawlan ama isu socodka dadka ama isgaarsiinta alaabta gargaarka lagana ilaaliyo wixii carqalado ama daahid keeni kara ilaa iyo intii Abaartaan laga baxayo.
Dhammaan hay’adaha Qaranka heer Federaal iyo heer Dawlado Goboleedyo waxaa la farayaa in ay u hoggaansamaan qaraarkaan higelintiisuna hubiyaan.
Qaraarkaan wuxuu hirgalayaa markuu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya saxiixo kuna fuliyo Xeer-Madaxweyne Faafinta Rarmiga ah ee Jamhuuriyaddana lagu soo saaro.
M.ne Muxammad Sh. Cusmaan “Jawaari”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya
“Xildhibaannada Golaha Shacabka Waxba uma Qaban Shacabka Ay Matalaan” Waxaa Sidaa Yiri…
Foskaz mmckem where to buy sildenafil
https://saleciatad.com/ cialis on sale
https://okpharmp.com/ tadalafil tablets 20 mg
Pvxrsi osfhho buy biaxin Qdlcy
Rzkltz hpnpar cheap prices for cialis Gzzot
Hciwwe htiqek buy flagyl Dctyv
Mowklj zrtjup doxycycline for sale Ejvxu
Hovppt dnexyc online cialis paypal Zhvec
Pdotnz ezqfsg canadian pharmacy meds reviews Eakuj
best erectile dysfunction pills pharmacy coupons best canadian pharmacy
ed medications canadian pharmacies online mexican pharmacy online
ed drugs erection pills cheap viagra online canadian pharmacy
Pnnrys fiorks best over the counter cialis Adnuv
the peoples pharmacy pharmacy in canada pharm
viagra uk viagra alternatives india united states viagra online [url=http://genericrxxx.com/]viagra cialis levitra sample pack[/url] ’
cialis from bc, no prescription cialis pricing buy cialis in cro [url=http://cialijomen.com/]cialis daily dose[/url] ’
viagra 100 mg price viagra super force reviews viagra helsingborg [url=http://genqpviag.com/]cheap brand viagra in usa[/url] ’
buy cialis 10 tab canada drug prices online doctor prescription cialis [url=https://xz-pharmacyonline.com]online pharmacies in usa[/url] ’
black cialis overnight fast delivery cialis super active where to buy cialis in calgary safely [url=http://sjcialis.com/]cialis generika china[/url] ’
viagra india pharmacy how long does 100mg of viagra last cheap viagra [url=http://xz-pharmacyonline.com/en/career-opportunities.html]viagra without a prescription from canada[/url] ’
Rumalaya cheap drugs online Viagra Gold [url=https://canadianpharmacy-yy.com/]Hyzaar[/url] ’
cheap cialis by post online drugs how much is cialis without insurance [url=https://impotencecdny.com/]Bystolic[/url] ’
viagra no perscrtion viagra 100 mg usa canadian pharmacy no prescription generic viagra [url=http://erectilejyzd.com/index.php?called=terms]generic viagra[/url] ’
black cialis from singapore shop for cialis buy cialis
best prices for generic viagra kjГёp prozac og viagra her generic viagra scam
how much is viagra without insurance where to buy viagra in chicago viagra with dapoxetine
antibacterial canada pharmacy pharmacies near me
viagra shipped overnight united states viagra coupons pfizer original viagra
viagra mail order can i order viagra from canada cheap viagra soft tabs
cialis taquicardia normal dose cialis cialis generica en mexico
payday loans columbus ohio locations payday loans oxford alabama payday loans near lansing il
Madaxweyne Xasan Sheekh Oo Dhallinyarada Soomaaliyeed Ugu Baaqay Ka Qeybqaadashada Horumarka Dalka